Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAnna
Wamkelekile kwindlu yethu yeendwendwe egadini, kwindawo ezolileyo ngaselwandle. Indlu yeendwendwe inegumbi eliphezulu elineebhedi ezimbini zomntu omnye kwaye umgangatho ophantsi unebhedi yesofa (140cm) yabantu aba-2. Ulwandle kunye nezibuko elincinci laseGrötvik, likude nge-500, ehlotyeni uya kufumana i-Halmstad Wakepark ngasezibukweni. Uya kuba nendalo, zombini ulwandle kunye nehlathi ngeendlela ezithandekayo zokuhamba nje kwikona. Isikhululo sebhasi esikufutshane sikwi-100 m kude. Halmstad citycenter 6 km kunye nolwandle Tylösand 3 km.
Indlu yeendwendwe yi-25 m2 kunye neloft eneebhedi ezimbini ezingatshatanga. Ikhitshi elincinci elinefriji kunye nefriji. I-oveni, isitovu. I-coffeemaker kunye neketile ukubilisa amanzi. Igumbi lokuhlambela lineshawa, itowel yokufudumala yombane, indlu yangasese, isinki kunye nekhabhathi yesipili. Ngasemva kwindlu yeendwendwe kukho ipatio encinci enetafile yokutyela kunye ne-grill.
Indawo ezolileyo ngaselwandle. Uya kufumana iilwandle ezinesanti, amatye, ihlathi kunye nechweba elincinci laseGrötvik elikufutshane. Ehlotyeni uya kufumana indawo yokutyela echwebeni kunye ne-wakepark, kunye ne-skateboard ramp nalapho. Ibala lokudlala langaphandle, ijimu yangaphandle, iindlela zebhayisekile yasezintabeni kunye nebala lemidlalo likufuphi. Esona sitophu sebhasi sikufuphi yi-100m. Kukho iivenkile ezimbini ezincinci zegrosari kumgama wokuhamba, 1,5-2 km: Tempo kunye nevenkile enkulu ye-ICA. Kwi-Söndrum centrum, iikhilomitha ezi-2 uya kufumana iindawo zokutyela ezinje ngeSöndrums pizzeria, Umai sushi kunye neDaengs Wok kunye nekhemesti. Kukho indawo yokubhaka ebizwa ngokuba yiKrantz bröd kumgama oziikhilomitha eziyi-1,5.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$166
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Söndrum